प्रचण्ड-माधव पक्षले आज काठमाडौंमा डेढ लाख मानिस उतार्ने दाबी, कहाँ-कहाँबाट शुरु हुँदैछ जुलुस? खबरमञ्च
प्रचण्ड-माधव पक्षले आज काठमाडौंमा डेढ लाख मानिस उतार्ने दाबी, कहाँ-कहाँबाट शुरु हुँदैछ जुलुस?
९ माघ, खबरमञ्च, at 7:49 AM
By खबर मञ्च / January 22, 2021 / Comments Off on प्रचण्ड-माधव पक्षले आज काठमाडौंमा डेढ लाख मानिस उतार्ने दाबी, कहाँ-कहाँबाट शुरु हुँदैछ जुलुस?
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको संसद विघटनविरुद्धको बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।
उक्त विरोध प्रदर्शनमा नेकपा प्रचण्ड– माधव नेपाल पक्षले डेढ लाख मानिस उतार्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वटा स्थानलाई मुख्य आर्कका रुपमा तोकिएको छ । माइतीघर मण्डला, डिल्लीबजार चारखाल, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, प्रदर्शनीमार्ग, शान्तिबाटिका, त्रिचन्द्र कलेज, बाल्मिकी कलेजबाट जुलुस निकालिने छ । त्यस अन्र्तगत माइतीघरबाट सुरु हुने जुलुस काठमाडौं क्षेत्रनम्बर १ र २ तथा भक्तपुर काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली जिल्ला, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा रामेछाप जिल्ला, पेशागत, प्रेस संगठन, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकिल, इन्जिनीयर शिक्षक र प्रदेश नम्बर २ जुलुस भद्रकाली हँुदै शहिदगेट एनएसी भोटाहोटी रत्नपर्का पुग्नेछ । त्यो जुलुसका नेतृत्व नेताहर गणेश साह, गिरीराजमणि पोखरेल, मात्रिका यादव, लिलामणि पोखरेल, हरिवोल गजुरेल, पेशल खतिवडालगायतले नेतृत्व गर्नेछन् ।
आर्कहरुबाट सुरु हुने जुलुुस तोकिएको रुटहँुदै रत्नपार्क पुगेर मुल जुलुसमा मिसिनेछ । सबै आर्कको नेतृत्व केन्द्रीय नेताहरुले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । दोस्रो आर्क रहेको डिल्लीवजार चारखालबाट काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्रनम्बर ३,४ र ५ को जुलुस निस्किनेछ । यो आर्कमा वर्षमान पुन, वेदुराम भुुषाललगायतले नेतृत्व गर्नेछन् ।
त्यसैगरी लैनचोर आर्कमा भीम रावल, शक्ति बस्नेत, नन्दकुमार प्रसाईको नेतृत्वमा जुलुस निस्कने छ । त्रिपुरेश्वर आर्कको नेतृत्व देवेन्द्र पौडेल, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले गर्नेछ्न । कुपण्डोलबाट कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुषल, रघुजी पन्त, नन्दकुमार थापा तथा प्रदर्शनीमार्गबाट घनश्याम भुषाल र जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा जुलुस निस्कनेछ ।
शान्तिबाटिकामा नारायणकाजी श्रेष्ठ र योगेश भट्टराइले नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैगरी त्रिचन्द्र कलेजमा देव गुरुग, रामकुमारी झाक्री लेखनाथ न्यौपाने र हितमान शाक्यले नेतृत्व गर्नेछन् । त्यस्तै बाल्मिकीबाट अमृत बोहोरा मुकुन्द न्यौपाने विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नेछन् । उक्त दिन मञ्च तथा मुख्य नेतृत्वको सुरक्षाको नेतृत्व रामप्रसाद सापकोटाले गर्नेछन् । सापकोटा राष्ट्रिय युवासंघका संयोजक हुन् ।
निर्देशिकामा जुलुसको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेताहरु र स्वयमसेवकबीच समन्वय अनिवार्य गर्न भनिएको छ । सबैतिरका जुलुस रत्नपार्कमा जम्मा भएर मुल जुलुसमा परिणत हुनेछ । उक्त जुलुस रत्नपार्क, बागबजार, पुतलिसडक, प्रदर्शनीमार्ग, भद्रकाली, सहिदगेट एनएसी भोटाहिटी रत्नपार्क, विद्युतप्राधिकरण हुँदै सभामा परिणत हुनेछ ।
Last Modified: January 22, 2021 @ 2:48 pm
तस्बिरमा हेर्नुस्, प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे आन्दाेलन